Pfungwa dzekuita muUbuntu 16.04 LTS mushure mekumisikidzwa | Linux Vakapindwa muropa
Pfungwa dzekuita muUbuntu 16.04 LTS mushure mekumisikidzwa
Canonical yakaburitswa Ubuntu 16.04 LTS sekuziva kwenyu uye nemataurirwo atakaitwa kubva kuLxA, uye ikozvino vazhinji venyu makazviisa pamushini wenyu kuti muone nhau dzainounza. Kunyangwe paine zvechokwadi paine kumwe kunyunyuta nezve zvimwe zvinhu zvakatangwa neiyi distro, izvo zvekugadzirisa kuti zvigadzirise hazvina kutora nguva refu. Sezvatakatsanangura kare, shanduko hadzina kunyanya kuratidza kana kupenga (zviri pachena sezvo iri LTS), asi iwo akakosha shanduko.
Mushure mekuisa yedu inodiwa Linux distro, Tinofanirwa kuita nhevedzano yezvinhu kuti igadzirire, zvirinani kubva mumaonero angu, nekuti vamwe vanogona kunge vaine zvimwe zvavanofarira. Zvakanaka, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita mushure mekuisa, zviripachena, kuongorora uye kuona nhau dzinoburitswa muUbuntu 16.04 LTS mushure meUbuntu 14.04 LTS. Semuenzaniso Kubatana Dash iyo isingasanganisi ekutsvaga ekutsvaga uye zvimwe zvehunyanzvi uye zvinoonekwa shanduko.
Chimwe chinhu chaunofanirwa, uye chinokurudzirwa kwazvo mushure mekuisa, iri simudzira system. Tarisa uone kana paine chero zvigadziriso zviripo, sezvo izvi zvichizovandudza sisitimu, kugadzirisa zvimwe zviputi, uye kusimbisa kuchengetedzeka Kuti uite izvi unofanirwa kuenda kuSoftware Kugadziridza (Gadziridza Software) iyo iwe yaunogona kuitsvaga kubva kuDash. Kana iwe uchida kuve nemabatiro ari nani emitambo yako yevhidhiyo kana magiraidhi mune zvakawandisa, zvirokwazvo zvichauya kwauri kuti uise madhiraivha eimba yekadhi rako remifananidzo. Kunyanya kana uine Steam yekutamba ...
Iwe unogona zvakare kusimudzira multimedia nekumisikidza iyo midhiya codecs kutamba odhiyo nemavhidhiyo mumafomati senge mp3 uye mp4 zvichiteerana. Zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kugonesa iyo Yakatemerwa nekudzvanya kamwe chete kubva kuUbatana Tweak Turu (isai iyo kana iwe usati uinayo), uye kubva ipapo iwe unogona zvakare kufambisa Unity launcher kuenda pasi, mune yakachena OS X maitiro Iwe haudi kuisa Unity Tweak Chishandiso kufambisa iyo yekutanga bar, nyora:
Imwe sarudzo yakanaka kuisa vamwe nyowani GTK uye Icon theme kushandura kutaridzika kweiyo interface kana uchida. Semuenzaniso, unogona kuzviita kuti zvioneke seApple Mac OS X (izvozvi zvawafambisa chinozarura kusvika pasi pechidzitiro) nemitambo yechinangwa ichi. Kune zvakare madingindira e Microsoft Windows 10-senge maonero uye mamwe madingindira. Kana zvichikunetsa uko mamenyu eapp anowoneka muUbuntu uye anonyangarika mushure memasekonzi mashoma, iwe unogona zvakare kugadzirisa izvi kubva kuSystem Zvirongwa -> Chitarisiko.
Sezvaungatoziva kare, iyo Ubuntu Software Center yairegeredzwa kwazvo, iine zvishoma zvirongwa zvakagadziridzwa uye nekudaro Canonical yakafunga kuibvisa. Iye zvino unogona kuona iyo nyowani yeGNOME Software Center, iine up-to-date uye yakafanana-inotaridza software. Naizvozvo hauzove nekusagadzikana kukuru mukuishandisa, izvozvi chete zvirongwa ndizvo zvichave kurongeka kwezuva. Kwandiri imwe yeshanduko dzinotarisirwa kwazvo. Ehezve, sezvaunopinda kuti uzvione, isa zvaunofarira zvekushandisa.
Iwe unogona zvakare sync yako gore account kana iwe unayo, kurodha pasi kana kurodha zvirimo kubva kuDropbox, OneDrive, OwnCloud, Insync kana Google Drive, pakati pevamwe, sezvo sekuziva kwako, Canonical yakasiya gore rayo kare kare. Uye handizive kuti ndokukurudzira kwauri here kana kuti kwete, nekuda kwedambudziko rakakura uye rinodzokororwa, asi unogona kuisa Adobe Flash kuitira kuti zvese zvirimo mumawebhu zvionekwe. Ehezve, ive shuwa yekugadzirisa iyi software kuti ifukidze zvinokuvadza zviri kubuda ...
Mune Zvirongwa zveSystem, pfuurira kuenda ku Kuvanzika & Kuchengetedzwa, ipapo iwe unogona kuita zvimwe zvinhu kugadzirisa aya madingindira. Semuenzaniso, gonesa kana kudzima pamhepo kutsvaga kwekutsvaga kweUnited Dash, chinja kuti madhairekitori uye mafaera anoonekwa sei muDash, chinja marongero ekukanganisa ekuzivisa kuCanonical, etc. Ehezve kugadzira backup makopi kwakakosha kwazvo, kunyanya neiyo rudzikunuro yatiri kuona munguva pfupi yapfuura uye iri kusvika kune vashandisi kuburikidza neemail kubva kuPost Office.
Zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kuisa desktop desktop uye chitarisiko chakanaka, pamwe nekushandura kupenya kwescreen kuve kukosha kwakakodzera kuitira kuti isanetse maonero ako. Kana uchida, unogona kushandisa f.lux software yeizvi. Kuchengeta iyo system nguva dzose pane poindi, unogona kuisa mamwe system yekuchenesa seBleachBit, iyo ichaita kuti system yako iwedzere kukurumidza uye zvigoitika kusunungura imwe nzvimbo pane rakaomarara dhisiki, uye kunyatso kujekesa mabhurawuza macache, nhoroondo, nguva, ndangariro marara, matanda, nezvimwe, izvo zvakare zvakanaka kuchengetedzeka kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Pfungwa dzekuita muUbuntu 16.04 LTS mushure mekumisikidzwa
Ini handidi Ubuntu 16.04, ndazvipa mumwe mukana mushure megore rinopfuura ndichishandisa Linux Mint uye chokwadi ndechekuti, zvaitaridzika kwandiri kunge ndapedza hafu uye Kubatana kwakaramba kusingamedze. Iye zvino ndine kukahadzika kuti ndione Kubuntu iri kana kudzoka kuMint, iyo yandiri kugadzikana nayo.
Mint yakanaka chaizvo !! Pane vandinoda, mumwe anongoshamisika. Munguva pfupi yadarika ndanga ndichishandisa iyo Pink KDE… Zvakare (uye nekukurumidza pandingakwanisa kutsiva HDD yakanganisa) ndichaedza iyo Ubuntu nyowani.
Ini ndinogara ndichikurudzira Xubuntu. Zvinotaridza kwandiri nekure kwese kwese kuita-mhando distro (inogadziriswa mune akasiyana ekuona maficha). Pane yekare kwazvo Hardware ini ndinoshandisa Xubuntu seyakagadzika system uye Fluxbox mune yakajeka mifananidzo.
Ini ndinobvumirana neruzhinji: iyo 16.04 shanduro hadzina kufamba zvakanaka neshanduro dze14.04… Uyezve, ndinoshamisika nezve kudzikisira…: D
Ini ndaive neUbuntu 16.04 neUniity asi kushanda zuva nezuva kwaitaridzika kunge kwakaomarara. Ndakafunga kuisa XFCE nemushonga mutsvene, iri nyore, inokurumidza uye nyore kushandisa interface.
Ini ndinoda Kubatana, asi kabhuku kangu ndeye chaiyo crap, ine amd c70 processor, ini handina kumbobvira ndada xubuntu, asi zvakanaka! Yaive iyo yaive yakanyorova, tisingataure Lubuntu ndiye aiita zvakanakisa asi, sekutaura kwangu, handidi ivo. Iye zvino ndiri kuyedza Linux Mint Rosa, xfce / sinamoni, uye dzimwe nguva kana iwe uchida kuita zvimwe zvinhu panguva imwe chete, inotanga kuita chando kudzamara yaita zvekare .. asi kana ikawana kuita kwakanaka muUbatanidzwa, ini handidi ' kusava nechokwadi nazvo nekuti ndiyo yakanakisa inogovera nzvimbo pachiratidziri kwandiri.
aldo lamboglia akadaro
Ini ndinoenderera neUbuntu, kana xubuntu, kana imwe forogo .. nekuti iyo chete inounza madhiraivha kumusoro uye inobvumidza kuiswa pasina matambudziko pamakomputa matsva ndiUbuntu. Kuda kana kwete ndizvo zvakanakisa mupfungwa iyoyo. Mint yakanaka kwazvo asi yakandipa yakawanda matambudziko pamabhuku ekunyorera. Saka hapana sarudzo, isa Ubuntu uye ita kuti ive yakanaka, kune kwako kufarira, kana kuenda kune kumwe kugovera. Uye yekupedzisira "HAPANA"
Pindura kuna Aldo Lamboglia
Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Gnome, MUNHU WESE, vane zvakafanana zvinyorwa, ergo, ivo vane zvakafanana software, zvakafanana meseji uye zvese zvakafanana. Ini handinzwisise chikonzero nei uchitaura zvaunotaura?
Hausi unorema nekuti haunodzidzisa Yukiteru
Ubuntu iri mukutungamira se distro, asi iine xfce mumaonero angu, ndiyo mubatanidzwa wakakwana. Mushure mezvose, vazhinji vedu tinotsvaga kumhanya mune OS
Mhoroi, mushure memakore akawanda kudaro ndichishandisa windows xp, ndachinjira kuUbuntu 16.04 ne lubuntu. Handina ruzivo nazvo. Ndakafunga na lubuntu nekuti ndichitarisa pa internet ivo ndivo vaiti ndirikuda zviwanikwa zvishoma uye zve netbook rangu ndakaona riri iro rakanakisa.
Mushure mezvinhu zvese izvi ndinoda kuziva kuti ndinga shandure sei interface ne desktop pakuda kwangu (kana kuti ndinozviita nediki tutori kana kuitumira kwandiri). Icho chinongedzo chingave icho cheSAO (Sword Art Online), zvakanaka, chinhu chisina kujairika asi ndakachifarira. Ndatenda zvikuru pamberi.
Carlos Suarez muchengeti wemufananidzo akadaro
Mhoroi, mumwe munhu angandipe ruoko, gadza ubuntu 16.04 ndobva ndaisa sinamoni pairi, inotonhorera, asi sarudzo yekugovana desktop inonyangarika, zvakare sarudzo yekubatanidza kuburikidza netemu sevhisi uye kunyangwe kupasa chimwe chinhu kuburikidza ftp
Kunyangwe iwo mapakeji akaiswa, ini ndinototarisa nemaneja wepakeji, asi handigone kuvashandura nemaziso.
Ndatenda pamberi pabatsiro
Pindura Carlos Suarez
Maitiro ekubatanidza Avast muNautilus
Systemd uye SELinux: Yakachengeteka?